Inona avy ny vina entinao?
“Raha vao nandray ny toerana ny tenako tamin’ny volana desambra 2016, dia natao voalohany ny fijerena ifotony ny olana mba hitadiavana ny vahaolana. Momba ny fiofanana omen’ny sekoly dia tarigetrako ny hanatsara sy haha-matihanina izany. Hampanaraka ny fiofanana amin’ny fenitra takiana iraisam-pirenena momba ny fandraharahana ny fonja. Laharam-pahamehana ihany koa ny ady amin’ny kolikoly ao anatin’ny fifaninanana hiditra ho mpianatra eto amin’ny ENAP. Marihina fa nahavita fotodrafitrasa vaovao sy asa fanitarana koa izahay eto amin’ny sekoly: ohatra ny fanampiana efitrano fianarana, ny efitrano fatoriana, ny birao sy toeram-piofanana isan-tsokajiny.
Raha 200 monja no mpianatra afaka noraisina teto tamin’ny fotoana nandraisako ny andraikitra maha-talen’ny sekoly ahy, ankehitriny ny ENAP dia afaka mandray mpianatra 600 ka hatramin’ny 700 vokatr’ireo fotodrafitrasa vaovao sy asa fanitarana ireo”.
Andrandrain’ny besinimaro fatratra ny fifaninanana manaraka ho fidirana eto amin’ny ENAP. Aiza ho aiza ny momba an’izay?
“Efa vonona ny hitsivolana mametraka ny fifaninanana saingy noho ity amehana ara-pahasalamana ity sy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 dia naato aloha ny fifaninanana. Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny tetikasa PAJMA dia efa vonona avokoa ny fampitaovana rehetra. Efa vononatanteraka ny fanomanana sy ny fikarakarana. Ny firariana dia ny hivahan’ity amehana ara-pahasalamana ity ka antenaina ny hahafahana manatontonsa ny fifaninanana mialoha ny faran’ny volana novambra 2020”.
Manamboninahitra teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ianao fahiny. Inona no mety ho tombony azonao entina ho an’ny fahdraharahana ny fonja amin’izay?
“Misy dia misy tokoa. Raha vao vantany mivaha ny amehana ara-pahasalamana dia hisy ny fiaraha-miasa mikasika ny fiahiana ny fandriam-pahalemana sy ny fiofanana hiarahan’ny zandarimariam-pirenena, ny tafika Malagasy ary ny fandraharahana ny fonja. Efa nisy fihaonako tsy ofisialy akory,tamina tompon’andraikitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Tanjona ny haha-ofisialy nyfiaraha-miasa sy ny fanaovan-tsonia izany”.
← Fanapariahana lalàna eny anivon’ny Kaominina